WHERE IS MY FRIEND'S HOUSE? : माया मेमसाब (१९९२)
स्वतन्त्रताको खोजिमा भौतारिने एउटा नारीको चित्र हो । आफ्नो मनमानीमा बाँच्न पाउनु माया (दिपा शाही)को लागि स्वतन्त्र हुनु हो । ऊ युवतीबाट महिला हुन्छे । एकल केटीबाट श्रीमती हुन्छे । अनि एउटा श्रीमती हुँदाहुँदै पनि कसैको प्रेमिका हुन पुग्छे । ऊ पूर्वीय संस्कृतिले सभ्य भन्ने भेषबाट पाश्चचात्यसम्मलाई अँगाल्छे । ऊ जति स्वतन्त्रताको सिमाछेउ पुगेको अनुभव गर्छे उति नै परिधि फैलिँदै जान्छ जसरी आकाश छुन भर्र्याङ्ग हालिन्छ । अन्तत: उसले मनमानीभित्र स्वतन्त्रता भेट्दिन । अन्ध फिराइबाट जीवन्त खुसि भेट्न सक्दिन ।
अन्ध भक्तिलाई पनि माया भनिन्छ । भ्रमपूर्ण आभासलाई पनि माया भनिन्छ । जब समाज वा धर्मले छुट्ट्याएको फोगटोबाट खुट्टा बाहिर निकालिन्छ यहाँ मायाले नै डोर्याएको हुन्छ । घृणा पनि कमसल कुराप्रतिको माया र मोह हो । यस अर्थबाट हेर्ने हो भने चलचित्र ‘माया’को नाम सार्थक छ । माया चलचित्रकी मूख्य पात्र त हुँदै हो तर चलचित्रको मूल विषयवस्तु पनि माया नै हो । मायालाई ऊ भित्रको मायाले डोर्याउँछ । उसले भ्रमको बाटोमा पाइला राख्छे त्यसपछि पछाडि फर्केर हेर्दिन । ऊ अन्धी बनेर भौतारिन्छे । डोहोरिन्छे । मायालाई ईमान्दार र असल पतिले कहाँ डोर्याउन सक्यो र । न सामाजिक मान्यताले बाँधेर राख्न सक्यो । न त धार्मिक दीक्षाले नै आवश्यकताको बोध गराउन सक्यो । ऊ नथाकुञ्जेल बगिरहन्छे मायाको आज्ञाउपर ।
पेटले माया खिच्ने भए समस्याको कारक थाहा हुने थियो । तर अज्ञात जिनिसले माया निर्धारण गर्ने हुनाले समस्या यथावतै छन् । नत्र के कमी थियो र मायालाई । सुन्दर घर थियो जुन् सम्पूर्ण रुपले द्रव्यात्मक पनि थियो । पति डाक्टर थियो । ऊ ईमान्दार थियो । असल थियो । माया गर्थ्यो । स्वतन्त्र छोडेकै थियो । शायद यी वस्तुहरू मायाको भौतिक छालाउपर नै यथावत् रहे होलान् । नत्र किन उसलाई नै थाहा हुँदैन उसलाई के चाहिएको हो भन्ने ?
अहिले संसारभित्र व्यापारीकरण छैन । व्यापारीकरणभित्र संसार छ । बोल्नेको खोलाभित्रको जग्गा बिक्छ । नबोल्नेको बीच सहरको घडेरी बिक्दैन । परिमाणले सफलता गन्छ । गुणस्तर गौण नै रहन्छ । त्यसैले ‘दिलवाले दुल्हानियाँ ले जायिङ्गे’ को चर्चा भइरहन्छ । नयाँपिढीँले ‘कुछ कुछ होता है’ को बारेमा सुन्न पाइरहन्छन् । ‘माया मेमसाब’ सतहमुनि खोतल्नेले मात्र भेट्छन् । तर मजा यसमा छ कि तरुल माटोमुनि नै पाइन्छ ।
Posted by rajankathet at 6:01 PM